မုန်းတယ် | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » မုန်းတယ်	28
Posted by Wow on Jul 28, 2012 in Creative Writing | 28 comments
အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ဗိုလ်ကျတတ်တဲ့ သူတွေကိုလဲမုန်းတယ်…
လူမျိုး၊ဘာသာ အစွန်းကျလွန်းတဲ့ သူတွေကိုလဲမုန်းတယ်…
စည်းကမ်းချက်တွေ လာရွတ်ပြတဲ့ သူတွေကိုလဲမုန်းတယ်…
Civilization ဘောင်တွေ လာခတ်ချင်တဲ့ သူတွေကိုလဲမုန်းတယ်… စေတနာမပါ ဗလာ လောကွတ်စကားတွေကိုလဲ မုန်းတယ်…
မမြင်ရတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စကားကြီးကြီးရွတ်ပြတတ်တဲ့သူတွေဆို ပြေးဖားတတ်တဲ့ သူတွေကိုလဲမုန်းတယ်…
ဘာမှလူကောင်မမြင်ရတဲ့အင်တာနက်မှာ ငါကဘာမို့ ငါ့ကိုလေးစားရမယ် ဆိုတဲ့သူတွေကိုလဲမုန်းတယ်…
မန်းဂေဇက်က မခွာနိုင်သေးတဲ့ ငါ့ကိုငါလဲမုန်းတယ်….
ဟီ…ဟိ… ပြောချင်ဒါဒွေပြောပြီး ပေါ့ပါးသွားလိုက်တာများ ဆေးနှစ်ထုတ်လောက်သောက်ပြီး ရေချိုးခန်းဝင် လိုက်ရသလိုပဲ…..
မိုးမှောင် says: လိုချင်သော အဖြေ ယူစေလော့
ဤ၍ ဤမျှ မုန်းတတ်သောသူကို အကျွနု မုန်း၏
Wow says: အားလုံးဝိုင်းတုတ်ရင် နင်ပါကြံရာပါဖြစ်ပြီ မိုးမှောင်….
ဟဲ…ဟဲ… မပြေးနဲ့… :D
မိုးမှောင် says: ဝူးထွားထွား အကျွန်ုပ် ငမိုးမှောင်သည်ကား အသင်မျှော်လင့်ထားသလို
ပြေးတတ်သူ မဟုတ်ပါချေတကား မှတ်လော့
အဆိုးမြင်ဝါဒီ ဖြင့် မုန်းတတ်သူမှာ အကျွန်ုပ်ပင်ဖြစ်ချေတော့၏ ။
ဟား ဟား ဟီးဟီး
htoosan says: မုန်းတယ် မုန်းတယ် နဲ့ အချစ်တွေ ပေးနေပြီးတော့များ .. ဟင်း .. ဟင်း …… :grin: :grin:
Wow says: ဟယ် နာဘယ့်တူ့များ ပေးမိပါလိမ့်… :P
htoosan says: အာဝါးတွေ ဒီလောက်ပေးနေတာလေ… :grin:
Wow says: လာမပြေးနဲ့ အာဝါး….. :D :P Was this answer helpful?LikeDislike 7028
ကြောင်ကြီး says: မုန်းတယ်
Wow says: နားမလည်တဲ့ စကားလုံးဒွေ လာရွတ်ပြတဲ့ ဥကြောင်ကိုလဲ မုန်းဒယ်….
ဥဥ says: အဲ့ဒီ နီနီရဲရဲဂျီးနဲ့ လှုပ်စိလှုပ်စိဂျီးဂိုလည်း မုန်းဒယ်………. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1073
Wow says: ဒါဆိုနီနီရဲရဲဂျီးနဲ့ ငြိမ်နေရမှာလား ဥဥရဲ့… :P
Was this answer helpful?LikeDislike 18
မိုးမှောင် says: နာ့ဂို ပဲ ချိမပေါ့ တခြားဘူမှ ချိပုေိခိ၁ိငိ
မောင်ပေ says: ဒီဇါတ်က ရှုပ်တယ်
Shar Thet Man says: ဟွန်………….ဘာလို့မုန်းရတာလဲ……………မေတ္တာနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါ…ချစ်လာပါလိမ့်မယ်
Wow says: မေတ္တာနဲ့ စောင်ပေပေကြည့်ရမှာလားဟင် ရှားသက်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1043
mayjuly says: မုန်းခြင်း အစ အချစ်ကတဲ့ …..
အချစ်ကိုတွေ့ပြီးမှ အမုန်းရောက်တာ ….
မုန်းတယ် အော်နေတဲ့သူက အချစ်တွေ အများကြီးယူပြီးလို့ …
ဘာလဲတော့သိဘူး …. ၀င်ပွားကြည့်တာ … :P
Wow says: မေဂျူးရောအဲဒါမျိူးကြုံဖူးလားဟင်… မုန်းပြီးချစ်တာလေ…. :P
နေ့ သစ်/ ဘဝသစ် says: ဝင်ဖတ်မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုလဲ မုန်းတယ် connection မကောင်းတဲ့
we R one says: မုန်း..မုန်း… မေ့မေ့.. မုန်းမေ့ပြီလား လို့မေးချင်တယ်….
Wow says: ဟဲ…ဟဲ ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ်ပါဘူး လူရှိန်အောင်ပြောကြည့်ဒါ….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 34
သရဲ ပြေး ဘီလူး ငို says: ရှိန်ပါလယ် ရှိန်သွားပါလယ်
လှုပ်စိ လှုပ်စိ လေးကို မက်ကျိနောက်လယ်
may flowers says: မုန်း…မုန်း……….မုန်းချင်သလောက် မုန်း ..။
Nadi Mg says: မုန်း မုန်း မေ့ မေ့ ၊ မုန်းမေ့ ပြီလားလို့ မေးချင်တယ် ။
Oo Oo says: အမုန်းမြို့သူ ပါလား.. :P
၀င်ဖတ်မိလို့ ဓါတ်ကူးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် မမုန်းခင်လေး တစ်ဆယ်ယူပြီး အမြန်လစ်မှ..အဟိ
Wow says: ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပြီး ၂ိပေးသွားဒဲ့ သရဲပြေးဘလူးငို(ဂျကားမစပ် ဘယ်ဘီလူးငိုဒါလဲဟင်င်)၊ မေပန်းလေး၊ နဒီမောင် ၊ အူးအူးတို့ကို ကျေးကျေးပါ…
Shwe Ei says: Men may come and
by Mandalay Gazette Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5587
Liquid_Sn@ke says: ကျုပ်ကို လိင်ပြောင်းပီး ဇာတ်လမ်းဆင်ရေးဒဲ့ ဆာယေးစယာ မ ဂိုလည်း
Wow says: ပြောချင်ရာဒွေပြောလိုက်ရဒါ ဘယ်လောက်အရသာရှိလဲ သိဘီလား… :D
Comments By Postအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - Mobile13 - မောင် ပေရာသီပိတ်ပွဲစဉ်များထဲမှ - Mobile13 - ခရီးသည်ကြီးအတ္တဆန် - ခရီးသည်ကြီး - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - Ko chogyiလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - Mobile13 - Ko chogyiဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - မောင် ပေ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးbin bo..........(ဘင်ဘို) - အလင်း ဆက် - မောင် ပေမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - မောင် ပေ - TheWinner Getprizeစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - Mobile13 - Ko chogyiရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - မောင် ပေ - Mobile13မိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - အလင်း ဆက် - အရီးခင်လတ်``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - TheWinner Getprize - ခရီးသည်ကြီးPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - မောင် ပေ - Miss Crystallineကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - Foreign Residentကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - မောင် ပေ - ခရီးသည်ကြီးကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - ခရီးသည်ကြီး - natureဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) - Mobile13နယ်မြေခံ စစ်တပ် ရဲ တို့ ငွေကြေး လာဘ်ယူကာ ပိုင်ရှင်မဲ့ ပစ္စည်းလုပ်ပစ်တော့မဲ့ ကုလားနဲ့ နွား သစ် မှောင်ခို ကိစ္စ - ခရီးသည်ကြီး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - ခရီးသည်ကြီး - TNAငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - ခရီးသည်ကြီး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - TheWinner Getprize - Ko chogyiမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ခရီးသည်ကြီး - ကိုရင်စည်သူမပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကလေး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - rain pricessကား ဒုက္ခ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Mobile13နံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဦးကြောင်ကြီး“ခေါင်းမာမနေဘဲ ပြောင်းလိုက်ကြရအောင်ပါ” - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - TNAဘားလမ်းက ပြန်ဖို့ ဘက်စ်ကားခ မရှိတဲ့ နေ့က - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Mobile13တွံတေးအလှူ.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - kyaw hteikယုံလား? - uncle gyi - KZEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities